Hydrofoiler XE-1 - bhasikoro remvura
Isu tese takajaira chokwadi chekuti vakomana veReddit vanotibatsira kusarudza gadget muchikamu chemutengo chiri nyore. Asi pane chimwe chikamu, uye ichi 200 ...
Mumusika wepasi rose, mhando yeMobvoi inozivikanwa zvishoma. Kungoti iyo kambani iri musoftware pane kuburitsa ...
Gore rega rega, iyo Chinese brand Xiaomi inotifadza neakagadziridzwa vhezheni yemabhurekete ekusimba. Kubva gore negore, gadget inowana itsva uye inonakidza ...
Kupeta bhasikoro remagetsi Bezior XF200 1000W
Hapana anoshamiswa nemabhasikoro emagetsi zvakare. Kutsvaga kwekumhanya uye huwandu hwatungamira mukubuda kwezviuru zvemhando dzakasiyana. ...
Huawei Watch D - smart wachi ine blood pressure monitor
Huawei Watch D smart wachi dziripo kutengeswa pamusika wepasirese.
Google Pixel Watch ine denderedzwa skrini
Iyo kambani yakaronga kuvhura Google Pixel smart watches makore mashanu apfuura. Vashandisi vemidziyo yeAndroid vagara vachitarisira…
Imwe kambani yeChinese brand Xiaomi, yakamisikidzwa mumusika wezvigadzirwa zvevatambi, yakapa nyika ne2 dzinonakidza…
Mutengi haachashamiswi nevatauri vanotakurika, saka Segway yakaburitsa gadget inonakidza yevechiri kuyaruka. ndezve…
Mugadziri wechiJapan wemidziyo yemifananidzo ane hanya nevashandisi vayo. Pamusoro peiyo firmware inowedzera kushanda kwekamera, inopa kutenga ...
Oppo akanzwa zvishuwo zvevatengi uye akatanga isingagoneke hunyanzvi hwepamusoro smartphone pamusika. Oppo Tsvaga X5 Pro…